मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ! अपनाउनुस यस्ता उपायहरु ।(भिडियो सहित) – yuwa Awaj
कार्तिक १६, २०७७ आइतबार 10
काठमाडौ : शरीरको एक भाग मोटो हुनु वा मोटोपन भनेको भिन्न भिन्न कुरा हो। प्राय: मानिसहरू मोटोपना र यो बीच भिन्नता थाहा पाउन सक्दैनन्। अधिकांश व्यक्ति यी सबैको लागि समान उपाय प्रयोग गर्छन्, नतीजा स्वरूप समस्या समाधान हुँदैन।
मुख्यतया दुई प्रकारका मोटोपना हुन्छ, एक सर्वाङ्ग मोटोपना हो, जहाँ सम्पूर्ण शरीरमा बराबर बोसो हुन्छ। तर मोटोपनाको दोस्रो प्रकारमा, यो अवस्था आउँछ जब कुनै व्यक्तिको शरीरको केही अंशमा धेरै बोसो बढी हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा जहाँ पाखुरा र पेटमा मोटो देखिन्छ तर बाँकी अङ्ग सामान्य देखिन्छ। तसर्थ, यो मोटोपना कम गर्न केवल विशेष उपायहरु मात्र प्रभावकारी हुन्छ। सामान्यतया आजको जीवनशैलीमा पेट लाग्ने समस्या बढी हुँदै गइरहेको छ।
यो समस्या कम गर्नको लागि तपाईंले आहारमा केही सुधारहरू बाहेक आफ्नो शरीरको आसन सच्याउनु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी तपाईंलाई मालिस गर्ने एउटा विशेष तरिका बताउँदैछौं, जसले बिस्तारै पेटको बोसो घटाउँछ।
मालिस गर्ने तरिका
यो एक साधारण मालिस प्रक्रिया हो जसमा गोलाकार गतिमा पेटमको मसाज गरिन्छ। तपाईं यसमा कुनै पनि तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यो दुबै पुरुष र महिलाको लागि समान रूपमा लाभदायक छ। तपाईं यो बिहान नुहाउनु अघि वा रात निदाउनु अघि गर्न सक्नुहुन्छ। मालिसपछि तातो पानीले नुहाउनु अझ राम्रो हुनेछ।
मालिस कसरी गर्ने त ?
एउटा भाँडामा तेल लिनुहोस्, दुबै हातका औंलाहरू यसमा राम्रोसँग डुबाउनुहोस्। अब, नाभीलाई केन्द्रको रूपमा विचार गर्दै, पहिला क्लक-वाइज त्यसपछि एन्टी-क्लकवाइज गोलाकार दिशामा ५ मिनेटसम्म मालिस गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया कम्तिमा १० देखि १५ पटक गर्नुहोस्। दैनिक बिहान र बेलुका यो उपाय गर्दा तपाईंले केही दिन मै यसको प्रभाव देख्नुहुनेछ।
Prevकिसमिसले रगतको कमि पूरा गर्नुको साथै, छन यति धेरै लाभहरु…हेर्नुहोस् ।
Nextमहानायक राजेश हमालले गरिखाऊ भनेर गरिब सुकुम्बासी लाई दिए ३ करोडको जग्गा…उहालाई उच्च सम्मान ।